အနမ်းတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်ပါရဲ့လား | Duwun
အာဘွား... အာဘွား။ ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေက ပါးလေးထိုးပေးရင် အာဘွားဆိုပြီး ပေးလိုက်တာပဲဟုတ်?
နမ်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးဟာ အချစ်ရဲ့သင်္ကေတကို အရိုးဆုံးဖော်ပြတဲ့ အမူအရာလေးတစ်ခုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း၊ မိသားစုဝင်၊ ဆွေမျိုး၊ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဘက်တို့ကို နမ်းတဲ့အခါ လူနဲ့ အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားပါတယ်။ နဖူးလေးကိုအနမ်းခံရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ မေးအစပ်လေးကို အနမ်းခံရတဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုမှ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အနမ်းတွေအကြောင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါ ဒီလိုတွေ ကွဲပြားသွားပါတယ်။
စပိုက်ဒါမန်း (Spiderman) ဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးလား။ မကြည့်ဖူးရင်တောင် ပုံတွေတော့ မြင်ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ပီတာပတ်ကားဟာ သူ့ရဲ့ချစ်သူကို နမ်းတဲ့အခါ အပေါ်ကနေ ဇောက်ထိုးဆင်းလာပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းသွားပုံက ရင်ခုန်ချင်စရာကြီးလေ။ အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ သူက လဲလျောင်းနေတုန်း မျက်နှာကို အုပ်မိုးပြီး ဖွဖွလေးနမ်းရတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းတင်မဟုတ်ဘူး နဖူးလေးကိုလည်း နမ်းလို့ရသေးတယ်။
နတ်သမီး၊ နတ်သားတွေက ကောင်းချီးပေးတဲ့အနေနဲ့ နဖူးလေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းပေးတယ်လို့ ပုံပြင်တွေ၊ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ခုလည်း ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့။ ချစ်သူရဲ့ မျက်လုံးတဝိုက်နားကို ဖွဖွလေးနမ်းပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုနမ်းလိုက်တဲ့အခါ သူ့စိတ်မှာ အေးချမ်းလုံခြုံမှုကို ခံစားရစေပါတယ်။
အာဘွား... အာဘွား။ ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေက ပါးလေးထိုးပေးရင် အာဘွားဆိုပြီး ပေးလိုက်တာပဲဟုတ်? ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ပြသတဲ့ အနမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုလည်း ရှိတာမို့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေကို နမ်းလို့ရတဲ့ ဖြူဖြူစင်စင် အနမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ပါးပြင်ကို နမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လည်ပင်းအစပ်နားက မေးရိုးလေးကို နမ်းလိုက်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့ဒီကနေမှ နားအစပ်နားကိုဖြစ်စေ လည်ပင်းကိုဖြစ်စေ ဆက်ပြီး နမ်းသွားလို့ရပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ဒီလို ဆက်ပြီးနမ်းတယ်ဆိုတာ ချစ်သူကို ဆွဲဆောင်နေတာပါပဲ။
ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုမန့်တစ်လည်းဆန်တယ်။ သူ့ရဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်း ဒါမှမဟုတ် အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုပဲ ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်တာ။ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုရဲ့ အထိအတွေ့က သိမ်မွေ့ငြင်သာလို့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုမန့်တစ်ဆန်တယ်မဟုတ်လား။ အချစ်ကို ရိုးရိုးလေးပဲ ပြသလိုက်တာ။ တခြား ဘာစိတ်မှ မပါဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းကို နီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ နမ်းတာမျိုးပါ။ မျက်တောင်မွေးတွေတောင် ထိနေတဲ့အထိ မျက်နှာချင်းအပ်ပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နမ်းရတဲ့အနမ်းပေါ့။
ဒီလိုအနမ်းကတော့ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှ နမ်းလို့ရပါမယ်။ လည်ပင်းနဲ့ပုခုံးအစပ်က နေရာကို နမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းယားစရာကောင်းလာတော့ ခပ်ဖွဖွလေး ကိုက်မိသွားရောလေ။ ဒါကြောင့် သေးစုပ်ဖုတ်ကောင် (vampire) အနမ်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အနမ်းတွေထဲမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးလို့ ဆိုရမလိုပဲ။ တော်ရုံနဲ့လည်း မနမ်းဖြစ်ကြဘူး။ စိတ်ချင်းညီနေမှ အပြန်အလှန်နမ်းရတာဆိုတော့ ချစ်စိတ်တွေ အရမ်းကိုများနေချိန်မှသာ နမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းထိထားပေမဲ့ လျှာအချင်းချင်း ထိတွေ့လှုပ်ရှားရတဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြင်းအနမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်လည်းများပါတယ်။ ဒီလောက်ထိနမ်းမိပြီဆို နောက်ထပ် မရပ်တန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်တာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက်ကတော့ ဒီလိုအနမ်းမျိုးကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ပိုမိုသာယာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။